सुत्केरी महिलाका लागि पोषिलो सुत्केरी सुप कसरी बनाउने ? :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
स्वास्थ्यखबर शुक्रबार, वैशाख १०, २०७८, १३:४०:००
सुत्केरी अवस्था महिलाको लागि विशेष संवेदनशिल र जोखिम अवस्था हो। यस अवस्थामा महिलाको लागि साधारण अवस्थामा भन्दा २५ प्रतिशत बढी पौष्टिकतत्वहरुको आवश्यकता पर्दछ।
सुत्केरी अवस्थामा महिलालाई विशेष गरी प्रोटिन शक्ति आइरन, फोलिक एसिड, भिटामिन ए र क्याल्सियनका साथै अन्य पौष्टिकतत्वहरुको थप आवश्यकता पर्दछ।
पौष्टिकतत्वको साथै नवजात शिशुलाई ६ महिनासम्म आमाको दूध मात्र खुवाउन बढी पोषिलो र झोलिलो खानाको आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले सुत्केरी अवस्थामा महिलाले पोषिलो सुप खानुपर्ने हुन्छ ।
पोषिलो सुपले सुत्केरी महिला र नवजात शिशुको पोषण अवस्थामा सुधार गर्न सहयोग पु¥याउछ। त्यसैले आज हामी पोसिलो सुप कसरी बनाउने भन्ने विषयमा जानकारी दिदैछौं।
पोषिलो सुप बनाउन केके चाहिन्छ ?
सुत्केरी महिलाले खाने पोषिलो सुप बनाउन ७० ग्राम चामल, २० ग्राम हरियो मुङ्ग, ३ ग्राम ज्वानो, २ ग्राम जिरा, २ ग्राम नुन र ५ ग्राम घ्यु वा तेल आवश्यक पर्छ।
कसरी बनाउने पोषिलो सुप ?
पोषिलो सुप बनाउन आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गर्ने । चामल, हरियो मुङ्ग, ज्वानो र जिरा राम्ररी केलाउने । ती सामग्रीलाई छुट्टाछुट्टै भुट्ने र फेरी केलाउने । केलाएको सामग्रीलाई फेरी छुट्टाछुट्टै पिस्ने । पिसिएको सामग्रीलाई चाल्ने । सबै सामाग्रीलाई मिसाउने र राम्ररी चलाउने ।
यसरी तयार पारिएको पोषिलो सुपको कच्चा खाद्यवस्तुलाई तातोपानीमा आवश्यकता अनुसार धुलो सुप, नुन र घ्यु राखेर राम्ररी चलाएर हल्का पकाउने । झोल सुप तयार भएपछि सुत्केरी महिलालाई खुवाउने ।
यस्तै बाँकी रहेको पोषिलो सुपको कच्चा खाद्य पदार्थलाई हावा नछिर्ने बट्टामा प्याक गरेर राख्न सकिन्छ ।
१०० ग्राम पोषिलो सुत्केरी सुपमा पाइने पौष्टिकतत्व यी हुन्
–जलांस ५ दशमलब ८,
–शक्ति ३७० दशमलब ७ कि क्या,
–प्रोटिन १२ दशमलब ७ ग्राम,
–चिल्लो पदार्थ १ दशमलब ८५ ग्राम,
–क्रुड फाइबर शुन्य दशमलब ९१ ग्राम,
–कार्वोहाइड्रेट ७५ दशमलब८ ग्राम पौष्टिकतत्व पाइन्छ ।
भरतपुर अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमितकाे चाप बढ्दै २७ मिनेट पहिले
शनिबार काठमाडौंमा ४६ हजारले लगाए भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा ५६ मिनेट पहिले